पछिल्लो दुई र आधा दशक भन्दा बढी अमेरिकी र अन्तर्राष्ट्रिय बियर बजार मा भयो छ कि वैश्विक परिवर्तनको बाबजुद, एक वास्तवमा सधैं साँचो हो: प्रकाश lager बिक्री अन्य प्रकार को टाढा अगाडि छ। शीर्ष दस, छ शीर्ष सात को र तीन भन्दा बेचिएको बियर विविधता सात संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक उज्ज्वल प्रकाश छन्। मात्र बड हल्का बियर को 2015 बिक्री लगभग तीन पटक Budweiser को बिक्री देखि प्राप्त भएको भन्दा बढी छ, जो लाभ, दुई भन्दा बढी अर्ब डलर प्राप्त भएको थियो समयमा, सबै भन्दा अमेरिका बेच्न छैन प्रकाश बियर। Coors हल्का बियर बिक्री मा एक अर्ब डलर आंकडा पुगेको छ। र तेस्रो स्थान मिलर लाइट बियर वर्ष को लागि जसको बिक्री 884 मिलियन डलर को राशि, थियो। तुलना लागि: सियरा नेवादा पेले जाँड, उत्कृष्ट-बिक्री र चिरपरिचित शिल्प बियर को एक, बिक्री को स्तर मा एक उन्नाइसौँ भयो - यसको आंकडा 79 र आधा लाख डलर थियो।
तर एक उज्ज्वल प्रकाश बियर छ? कसरी यसलाई अन्य प्रजातिहरू फरक छ? र उज्ज्वल प्रकाश बियर यति लोकप्रिय छ भने, किन चारैतिर के छैन? यी प्रश्नहरूको जवाफ तपाईं लाग्छ भन्दा कठिन र सजिलो दुवै हुन सक्छ।
उज्ज्वल प्रकाश बियर के हो?
पहिलो, का एक अवधारणा बुझ्न गरौं: प्रकाश lager - यो अन्य सबै प्रजातिहरू जस्तै तरिकामा पीसा छ जो साधारण बियर छ। उज्ज्वल प्रकाश बियर सम्म अरू सबैलाई रूपमा, केवल "सामान्य" बियर रूपमा छन्। सबै प्रजातिहरू आफ्नो स्वाद गर्न पतन हुनेछ, तर यो केही विविधता "सामान्य" छैन भनेर होइन। यो केही कारणले मानिसहरूको धेरै उज्ज्वल प्रकाश बियर कुनै पनि अन्य रूपमा राम्रो छैन भनेर विचार सुनिश्चित छ। दृश्य एक प्राविधिक बिन्दु मात्र कारक, कि दिइएको, यस श्रेणी मा विशेष बियर बुझाउँछ - यो जो एक कम रक्सी सामग्री जान्छ, क्यालोरी कम छ। यी बियर शब्द "उज्ज्वल प्रकाश" एक बियर रंग भन्दा एक अपेक्षाकृत कम रक्सी सामग्री र क्यालोरी उल्लेख, बरु।
के कम सामग्री नातेदार: तर यो निर्दिष्ट गर्न आवश्यक छ? र यहाँ खोल्छ सबैभन्दा अद्वितीय छ जो विशेषता प्रकाश lager,: उज्ज्वल प्रकाश बियर अक्सर भठ्ठी को "मुग्ध पार्ने संगीतको" मा पहिले नै अवस्थित प्रजातिहरू को एक एनालग छ। उदाहरणका लागि, भठ्ठी को उत्पादन को लाइन मा आवश्यक व्यापक दायरामा इम्पेरियल स्टाउट पकाउन गर्न सक्षम हुन नियमित स्टाउट धाउन छैन, तर सबै भन्दा प्रसिद्ध प्रकाश बियर सामान्यतया "हल्का" विद्यमान, अधिक उच्च क्यालोरी बियर को संस्करण हो।
यो बियर कसरी गरे?
यो घटना पनि किन, प्रायजसो, बुरा केहि रूपमा उज्ज्वल प्रकाश बियर उपचार छ व्याख्या गर्न मद्दत गर्न सक्छ। उज्ज्वल प्रकाश बियर मध्य-सत्तर मा देखियो। त्यसपछि, प्रायजसो, उज्यालो बियर पारंपरिक बियर को एक पानी हाले-तल थियो - स्वाद र सुगन्ध क्यालोरी कम गर्न बलिदान। बियर शमूएल एडम्स को ब्रान्ड हल्ला धेरै बजार मारा जब शमू एडम्स हल्का भनिन्थ्यो जो शमूएल एडम्स बोस्टन Lager, को प्रसिद्ध प्रजातिहरू को एक हल्का संस्करण, 2001 मा उद्योग हुर्के। समयमा कदम को Brewers शिल्प लागि अस्वीकार्य रूपमा मानिन्छ थियो। "को नब्बे को दशक मा, हामी लाग्यो, हाम्रो ब्रान्ड को लागि एक उज्ज्वल प्रकाश बियर जस्तो थियो: ब्रान्ड Dzhim Koh, सधैं उज्यालो lager popularize गर्न उद्देश्य जो, को निर्माता आफ्नो स्थिति बताए? यो बियर स्वाद र सुगन्ध, फिक्का छैन, स्वाद नभएको Fizzy पेय को पूर्ण हुन मानिन्छ थियो। यो बियर सिर्जना गर्न आउँदा हामी पकाउने प्रक्रिया द्वारा अधिक सीधा दुवै नुस्खा भन्दा काम र थियो। " यो अनुसन्धान अवधि जो समयमा 23 बियर विकल्पहरू सिर्जना दुई वर्ष, लामो थियो।
बियर शमू एडम्स लाइट को इतिहास पकाउने प्रकाश lager मामिलामा दुई अंक जोड दिन्छ। पहिलो, उज्ज्वल प्रकाश बियर सामान्य भन्दा कम क्यालोरी छ, यो कुनै पनि विशेष स्वाद प्रोफाइल प्रतिबिम्बित हुँदैन। दोश्रो, हुनत पकाउने प्रकाश lager नजिक निरीक्षण मा अन्य बियर, को मामला मा नै प्रक्रिया बाट सिद्धान्त कुनै फरक छ, यो अझै पनि कहीं अधिक जटिल छ।
विशेष प्रविधि: उत्पादन प्रक्रियामा मतभेद
यस मदिरा प्रक्रिया चलिरहेको बेला पाचन clobbered MALT भनिने विशेष प्रविधि प्रयोग गर्दछ। यो VAT Mash गर्न थप गर्मी आपूर्ति बिना अतिरिक्त पानी थप नगरी multistage mashing सञ्चालन गर्न एउटा तरिका हो। यो प्रक्रिया अलि बढी समय र ध्यान लिन्छ, यो इन्जाइम को दमन मा एक कदम हो। यो बुझेर यसलाई यसरी बियर कम पौष्टिक बनाउने एक उच्च तापमान मा MALT kiln मा राखिएको गर्न सकिन्छ र MALT इन्जाइमहरु मार्न। बस इन्जाइमहरु विनाश fermenting शर्करा को संख्या कम गर्न र यसरी रक्सी सामग्री र क्यालोरी कम, राखे। तर, यो अव्यवसायिक भाषा व्याख्या गर्न आवश्यक छ भन्ने तथ्यलाई, उज्ज्वल प्रकाश बियर सिर्जना घर मदिरा को आधारभूत ज्ञान को सीमा बाहिर जान्छ कि तर्क छ। तर तपाईं मदिरा प्रक्रियाको दृष्टिकोणबाट हेर्न भने, क्रममा बियर सिर्जना यसलाई गाह्रो छ क्यालोरी संख्या कम गर्न, यो सिर्फ एक पूर्ण बिभिन्न विधि हो।
प्रक्रिया को जटिलता
तर, brewer Trevis Mur, संयंत्र मा काम गर्ने, विश्व-प्रसिद्ध "Budweiser" उत्पादन गरिएको छ, त्यो प्रकाश lager बियर को उत्पादन केही पक्षहरू यो गुणस्तर नियन्त्रण गर्न आउँछ विशेष गरी जब, एक बिट थप जटिल हुन सक्छ भन्ने विश्वास गर्छ। उज्ज्वल प्रकाश बियर बनाउन तिनीहरूले लगातार र दोहोर्याउन मिल्ने स्वाद पक्का कठिन छ। कारखाना उत्पादन हल्का lager बियर सबै प्रजातिहरू, सबै भन्दा कडे गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाहरु छन्, कम्पनी उच्च गुणवत्ता बियर संग बजार आपूर्ति गर्न सक्छन्।
किन यति केहि कम्पनीहरु यी बियर उत्पादन गर्छन्?
थप उज्यालो प्रकाश प्रजातिहरू, सबै भन्दा राम्रो बेचन जो उत्पादन गर्न किन अमेरिकामा एक्लै त्यहाँ पाँच अधिक हजार Breweries छन् भन्ने तथ्यलाई दिइएको,: गुणस्तर नियन्त्रण उच्च स्तर पछिल्लो प्रश्नको जवाफ हुन सक्छ? अमेरिका मा एक उज्ज्वल प्रकाश बियर अझै पनि एक घटना सबै भन्दा ठूलो बियर उत्पादकहरु अनुपम छ किन Trevis Mur धेरै कारण voiced। पहिलो, एक ठूलो मात्रा अर्थ र सामाग्री को गुणस्तर नियन्त्रण को उच्च स्तर। उदाहरणका लागि, प्रयोग MALT को सबै भन्दा एउटै कम्पनी स्वामित्वको प्रतिष्ठानबाट मा निर्मित छ। र यो संसारमा उच्चतम गुणस्तर को जौ MALT को उत्पादन मा दुनिया-प्रसिद्ध अनुभव प्रयोग गर्दछ। समय र पैसा - यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारक हो। उपकरण को प्रारम्भिक लागत prohibitively उच्च साना व्यवसायहरू लागि हुन सक्छ, र यो अध्ययन वर्ष लाग्छ र यो प्रक्रिया मास्टर अभ्यास।
ओसेसियन Name बियर: घर मा नुस्खा
मादक ककटेल नुस्खा: घर मा एक स्वादिष्ट पेय पकाउन कसरी
किन कुकुर सपनामा बाइट्स?
त्यहाँ छन् र के आवश्यक छ जहाँ गाडीको नलिका?
को लवण, एसिड र alkalis को Dissociation। सिद्धान्त र व्यावहारिक आवेदन
रोजगार व्यवस्था सिस्टम - सम्बन्ध बुझ्न गर्न प्रमुख
कागजात र अपवाद को सूची: एक भवन अनुमति प्राप्त
कसरी सेक्सी केटी को छवि बनाउन?